Ogaden News Agency (ONA) – Gudomiyaha JWXO Admiral Maxamed Comar Cisman oo Shir Khadka Talefonka ah la qatay Jaliyadaha Somalida Ogadenya ee Qaarada Waqooyiga America.
Gudomiyaha JWXO Admiral Maxamed Comar Cisman oo Shir Khadka Talefonka ah la qatay Jaliyadaha Somalida Ogadenya ee Qaarada Waqooyiga America.
Maalintii Sabtida ahayd February 15, 2014, Waxay jaliyadaha Ogadenya ee qarada Waqooyiga America isugu yimaden shir khadka Telefonka ah. Shirka oo ay ka soo qaybgaleen xubna ad u badan iyo madaxda ururka JWXO qaar kamid ah ayaa waxaa shirkan martisharaf ka ahaa Gudomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cusman.
Shirkan oo ay Hogminayen wakiilada Jaliyadaha Ogadenya ee qaradani W/America ayaa waxaa looga gol lahaa in xubnaha jaaliyadaha xogta halganka lagu siiyo isla mar ahaantana wixii howl shaqo halgan ahna lagu qaybsado. Xubno ka midah golaha dhexe ee JWXO ayaa waxaa ay halkaasi ka soo jeediyeen khudbado dhaxal gal ah oo isugu jira wacdi diini ah, Sooyalka Tariikhda Halganka Ogadenya, warbixinada Jaliyadaha Ogadenya ee qarada W/America. Waxaa xusid mudan khudbad diini ah oo uu soo Jeediyay Mudane Sh. Maxamed Rashiid oo runtii dhinacyabadan tabanaysay saamayn wayna ku yeelatay xubnihii nasiibka uyeshay inay dhagaystan.
Dhanka kale Waxaa khudbad wafi ah halkasi ka soo jeediyaya Gudoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cusman. Khudbada Gudomiyaha oo dhinacyabadan tabanaysay ayaa waxaa uu kaga warbixiyay Xalada dhabtaha ee ku sugan yihiin shacabka Ogadenya, Habsami u socodka halganka, dhibatada uu gumaystuhu ku hayo shacabka Ogadenya iyo waliba samaynta uu gumaysigu ku reebay dadka soomaliyeed ee kunool Jamhuriyada Somaliya.
Mar uu gudoomiyihu sawir ka bixinayay habsami u socodka Halganka Ogadenya iyo mesha uu marayo halganku ayaa waxaa uu gudoomiyuhu tilmamay inu halganku si wanagsan u socdo oo ah sidii loo qorsheeyay, dhanka kalana waxaa uu cadeeyay gudomiyuhu in Halgamayasha JWXO ee hubka u hensaystay xoriyada Ogadeya ay wajibaadkooda si hufan ugutan oo ay gumaysiga halbowlayashiisii wiqeen. Waxaa kale oo uu gudomiyuhu cadeeyay
in markii ay geesiyada JWXO ka adkadeen gumaysiga awrkiralayashiisii in uu gumaysigu goansaday inuu shacabka Ogadenya ku dhaqan inuu gumaado. Waxaase uu Gudomiyuhu raaciyay inaya shacabka Ogadenya ay qateen goan ah inay ama geriyoodan amay ay guusha hantaan Insha ALLAH balse aan looga fadhiyin shacabka Ogadenya inay gumaysiga u hogansaman.
Warbixin dheer kadib, gudoomiyuhu wuxuu kula dardaarmay xubnihii shirkan ka soo qayb galay inay labanlaaban dadalkooda kuwajahan halganka si loo xaqiijiyo yoolka halganka xoriyad doonka ah ee Ogadenya loogujiro.
Shirkan oo ahaa mid si wayn loo soo agaasimaya waxaa lagu soo gunaanaday suaalo lawaydiiyay gudomiyaha oo su ssabsanaa arimaha halganka Ogadenya. Waxuu shirku ku soo dhamaday jawi aad u qurxoon.